काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै जाँदा दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक निकै मारमा परेका छन् । ६० वर्षमाथिका र दीर्घरोगीहरू कोरोनाको उच्च जोखिम समूहमा पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
रोगसँग लडिरहेका र ६० वर्षमाथिका व्यक्तिमा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुने भएकाले उनीहरू कोरोनाको थप जोखिममा रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मुटु, मिर्गौला, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्छन् । दीर्घरोगीलाई आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारको योजनामा परेको छैन । हाल दैनिक २ हजार ५ सय जनासम्मको आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ ।
मुटुरोगबाट पीडित नागरिक कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् ४५ लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । क्यान्सर काउन्सिल नेपालका अनुसार बर्सेनि २६ हजार जना क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २५ लाख ९५ हजार जना नागरिक ६० वर्षमाथिका छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक कोरोनाको थप जोखिममा रहेको बताए । उनले भने, ‘उनीहरूमा अन्य व्यक्तिमा भन्दा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई हेलचेक््रयाइँ गर्नुहुँदैन ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई कोरोना परीक्षणको दायरामा समेटिने बताए । उनले भने, ‘दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना परीक्षणको दायराभित्र ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयन गर्दै लैजान्छौं ।’
राजधानीसहित देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालले सहज रुपमा सेवाप्रवाह नगर्दा ती बिरामी मर्कामा परेका छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा फलोअप आवश्यक पर्ने र दीर्घरोगी मर्कामा परेका हुन् ।
मुटुसम्बन्धी समस्या भएका ४७ वर्षीया पार्वती राणाले भनिन्, ‘फलोअपका लागि काठमाडौं जानुपर्ने थियो । अलिक बढी दुखेको छ । तर, मुलुकभर लकडाउन छ, के गर्नु ?’
मुख्यतः मुटुको समस्या, दम, क्यान्सर र मिर्गौलाको समस्या भएका व्यक्ति अहिले बढी प्रभावित भएका छन् । अहिले पनि अधिकांश अस्पतालले ती बिरामीलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य जाँच गरेको पाइँदैन ।
अहिले पनि मानिस अन्य रोगबाट दैनिक मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा बन्द नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
अधिकांश अस्पतालले ओपीडी सेवा पूर्णतः सञ्चालन नगरेको पाइएको छ । सरकारले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नभएको गुनासो गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
संक्रमित २ हजार नाघे
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २ हजार ९९ पुगेको छ । मंगलबार थप २ सय ८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या २ हजार ९९ पुगेको हो ।
कुल संक्रमितमध्ये १ हजार ९ सय ४९ पुरुष र १ सय ५० महिला रहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशका ६१ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म संक्रमितमध्ये २ सय ६६ जना निको भएका छन् ।
संक्रमण देखिएकामध्ये आठ जनाको मृत्यु भएको छ । आरटी–पीसीआर प्रविधिबाट ७५ हजार ३ सय ४३ जनाको कोरोना परीक्षण गरीएको छ । देशभर १ हजार ८ सय २५ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ४५ हजार ३ सय ७५ जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन् ।
जाडो समयमा अरु रोगसहित कोरोना भाइरसको जोखिम पनि बढी हुन्छ । सामान्यतया गर्मीबाट जाडो मौसममा प्रवेश गर्दा शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । वृद्धवृद्धा, बालबालिका दीर्घरोगी तथा अरु विभिन्न खालका रोग भएका व्यक्तिहरु धेरै प्रभावित हुने गर्छन् । जाडो मौसममा खासगरी कोरोनासँगै मौसमी फ्लू, पखाला लगा...
काठमाण्डाै – कोभिड–१९ (काेराेना भाइरस) काे सङ्क्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान...
पर्सा : कोरोना संक्रमित भई वीरगन्जको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराई रहेका मिर्गौला फेल भएका बिरामी कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेहरूमा बाराको सिमरा घर भएकी ३० वर्षीया सपना श्रेष्ठ, बाराको निजगढ घर भएका ५६ वर्षीय नर बाहादुर विक, पर्साको पोखरिया घर भएकी ६५ वर्षीया कोशीला देवी र वीरगन्ज-१० घ...
ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा
कोभिड–१९ महामारीको बढी असर बा–आमा (ज्येष्ठ नागरिक)हरूलाई परेको छ । झन् आम्दानीको स्रोत नहुने र सन्तान नहुनेहरूको जीवनयापन कठिन हुन पुगेको छ । सामाजिक दूरी बढ्दै गएको र सञ्चारका प्रविधिमा पहुँच नहुँदा उनीहरू एक्लिँदै गएका छन् । उनीहरूमा मानसिक समस्या देखापर्न थालेको छ । पहिला लागेको निको नहुने रोग र त्यसको उपचारले कमजोर बनाएको शरीरमाथि थप रोगको कारणले सङ्क्रमितहरूमा ज्येष्ठ नागरिको मृत्युदर उच्च हुन गएको छ । बन्दाबन्दीमा बढ्दै गएको घरेलु हिंसासँगै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । तीन वर्षअघिको एक अध्ययनले छजना ज्येष्ठ नागरिकमा एकजना हिंसामा परेको देखाएको छ । यस विषम परिस्थितिमा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आइरहेका छन् । यसबीच विभिन्न देशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा विभेद गरिएको, प्राथमिकता नदिएको, परीक्षण नगरिएको, ठूलो संख्यामा केयर होममा रहेका ज्येष्ठ नागरिककोे मृत्यु भएको समाचार आइरहेका छन् ।
संखुवासभा — संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका–४ सेकाहाको च्यानडाँडामा रहेको १० घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । पहिरोले स्थानीय टिकाराम श्रेष्ठ, अर्जुन श्रेष्ठ, गिता श्रेष्ठ, मोहन गुरुङ, रबिन्द्र गुरुङ, चन्द्रबहादुर गुरुङ, कुमार श्रेष्ठ, मनिराज गुरुङ, गौरीमान गुरुङ र दोर्ची भोटेको घर उच्च जोखिममा परेको हो । जो...
गाउँमा घर बनाउने कामदार खोज्नु ‘काठमाडौँमा डेरा खोजेजस्तै’ :: Pahilopost.com
३१ असार, काठमाडौं । इजरायलले गाजामा रहेका हमास लडाकुविरुद्ध चार वर्षयताकै ठूलो आक्रमण सुरु गरेको छ । इजरायलका अनुसार ९० भन्दा धेरै रकेट हमलाको जवाफमा हमासका दर्जनौं स्थानमा आक्रमण गरिएको छ । सन् २०१४ मा हमासविरुद्ध भएको लडाइँपछि यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण रहेको बीबीसीले जनाएको छ । प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य अधिकारीहरुका अनुसार गाजा …
कस्मेटिक्स पसले बनेर १४ लाख ठग्ने दाजुभाइ प्रहरी फन्दामा
६ चैत, काठमाडौं । व्यापारीको भेषमा लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने दाजुभाइ काठमाडौं प्रहरी परिसरको फन्दामा परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज घर भइ काठमाडौं बस्दै आएका ३२ वर्षीय अनुपराज अर्याल र सोही ठाउँका ३४ वर्षीय सज्जन अर्याल छन् । उनीहरुले आफू कस्मेटिक सामान पसले भएको भन्दै व्यापारीलाई नागार्जुन–४ स्थित गोदाममा सामान …
OnlineKhabar फाल्गुन २०७४
व्यापारीको भेषमा १४ लाख रूपैयाँ ठग्ने दाजुभाइ प्रहरीको फन्दामा